Waa fallaagow! "Boqoraddu way fiicnayd laakiin ma hayno Charles" - Calaamadaha Jamhuuriyadda ee macallinka - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE »TREASON! "Boqorada ayaa fiicnayd, laakiin ma hayno Charles" - Calaamadaha Jamhuuriyadda ayaa calaamad u ah macalinka
Waxaa iman doona waqti Queen Elizabeth II oo waxay nagu dhaafi doontaa annaga iyo ina wiilkiisa Charles Charles wuxuu noqon doonaa boqorka England. Queen Elizabeth waxay ahayd Boqortimo tan iyo 1952, iyo markii wakhtigu yimaado, Charles wuxuu diyaar u yahay inuu qaato doorka. Si kastaba ha ahaatee, dukumiinte ayaa la yaabay haddii Charles uu hal maalin ku jiro mashruucan wuxuuna soo jeedinayaa in boqoradda ay noqon doonto "natiijada ugu dambaysa ee wanaagsan" ee Boqortooyada Ingiriiska.
In documentary ah YouTube The Waa waalli of Prince Charles, ka soo daahay Peter Marsh, waa professor ee cilmi nafsiga bulshada ka dhiga jaamacadda Oxford ayaa yiri: "Marka Queen dhinto, waxaan u malaynayaa in ay noqon doonto markii ugu markii waxaa jiri doona heshiis ah koritaanka on xaqiiqada ah in Boqortooyada ee dalkan dhaafo shaqo kasta oo wanaagsan waxaa laga yaabaa in ay mar.
"Waxaan u maleynayaa xilligan, waad ogtahay in nooca Jamhuuriyaanka noo ogolaanayo in aan ka fekerno in boqoradda ay fiicantahay, laakiin ma heysano Charles."
Doorashada 2019 waxay muujisay in ku dhowaad kalabar dadwaynaha Ingiriiska ay doonayaan Prince Charles in ay iska joogaan oo ay wiilkiisa ugu wayn ee William, u noqdaan boqorka soo socda.
Baadhitaanka ayaa lagu sameeyay by BMG Research oo ku hadlaya magaca Independent ayaa shaaca ka qaaday in 46% ee Ingiriiska rabto ugu horeysay casishay carshiga ay u oggolaadaan ee Duke of Cambridge si ay ula wareegaan
Prince Charles SNUB: boqoradda oo loo arkay natiijadii ugu danbaysay ee Monarchy Intaas waxaa dheer, 19659009% dadka jawaab bixiyeyaashu waxay muujiyeen "taageero xooggan" oo loogu talagalay gudbinta tooska ah ee taajka ah ee loogu talagalay William.
Inkastoo Charles uu sumcaddiisu si fiican u fiicnaayeen tan iyo markii uu guursaday guushii ay la gashay Princess Diana, taariikhyahannada Prince of Wales ayaa la soo saaray. dhowr fowdo.
Qoraha Tom Bower wuxuu ka hadlay "xayawaan" iyo "nin xaasid ah" oo ku jira sawirkiisa aan sharciyeysnayn ee Charles on 2018, oo cinwaan looga dhigay "Prince The Prince".
Iyadoo biographer boqornimada Sally Bedell Smith ahaa taxadir in ay xoogga saaraan in 2017, Charles "kulaylka ee Prince Charles: The kacsigiisa xaaraanta ah iyo hor imanayaana nolosha aan haboonayn" inkasta oo qirtay in ay ahayd mararka qaar "ba'an maqaarka wanaagsan - niyadsamaan ka xanaaqsan oo ".
Queen Elizabeth II waa Boqortooyada tan iyo 1952 (Sawirka: Getty)  bar dhalaalayaBrandsafety = ''
Qareen loo yaqaan xuquuqda bini'aadamka ee xuquuqda aadanaha ayaa sare u qaaday su'aasha ah inaan xataa u baahannahay boqortooyo.
David Haigh u sheegay Times Irish ah 2018: "Marka aad qumman hadasho boqortooyada macno - haddii aan lahaa boqortooyo ama jamhuuriyad, waa in la oggolaado, kuwaas oo la kala dhaxlo in ay cod ku socda dalka - marka dadka qaba ay madaxa ku hadasho, sida caadiga ah waxay dhihi, ma run ahaantii.
"Laakiin waxaan u maleynayaa in dadku dareenkooda u dhaqmaan si ka duwan. Waxay u maleynayaan, haa, taasi waa mid aad u fiican, maya? Waa wax dhaqameed wanaagsan oo aan fiicneyn, sida EastEnders. Ka dibna wadnaha garaacaa dufan »
Sida laga soo xigtay maqaalkan Irish Times, waa boqoradda oo "ahaataa mid ka mid ah xukunka boqortooyada".
Nasiib darrada qarxa ee fuushanka musqulaha ee diyaarad ayaa noqon kara mid deg deg ah - BGR